သူဌေး Archives - BuzzFeed Myanmar
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဟာ အလွန်ရှက်စရာကောင်းတဲ့ ပြစ်မှုတစ်ခုကို ကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သူဟာ ဘော့စ်အတွက် ရေဘူးထဲကနေ ရေငှဲ့ပေးရပြီး၊ ဒီအချိန်မှာ ဘယ်သူကမှ မသိဘူးအထင်နဲ့ ဘော့စ်သောက်မယ့် ရေခွက်ထဲမှာ တံထွေးကို ထွေးချလိုက်တာပါ။
ဘယ် သူဌေး က မွေးစားဖို့ ခေါ်ခေါ်.. “ကျုပ်အဖေနဲ့ အမေကို ဘယ်သူ ကြည့်ပေးမှာလဲ”..တဲ့
ချင်းနယ်စပ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ လောင်း ရှည်နယ်၊ ဆောမြို့နယ်ရှိ ငပန့်ကျင်းရွာတွင် နေထိုင်ကြသော ဦးဘဟန်နှင့် ဒေါ်ခင်စန်းရီ မိသားစု . .သူတို့ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သားလေးက မောင်မောင် . .ရုပ်ရည်လေးက သနားကမားလေး၊ အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ် တတိယတန်းကျောင်းသား၊ လိမ္မာရေးခြားလေးကလည်း ရှိ၊ စာကလည်း တော်ရှာတော့ မွေးစားချင် သူတွေ မရှား။
(၁၆)နှစ်နဲ့ သန်းကြွယ် သူဌေး တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ဒီဇိုင်နာကောင်လေးအကြောင်း
တစ်နေ့မှာ မီလျံနာဖြစ်ရမယ်ဆိုတာ လူအများစုအတွက် အိပ်မက်တစ်ခုသာဖြစ်ပေမယ့် Dhillan Bhadwaj ဆိုတဲ့ကောင်လေးကတော့ အသက် (၁၆)နှစ်နဲ့ မီလျံနာတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အခုဆို (၂၁)နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Dhillan ဟာ အင်္ကျီဒီဇီုင်းတွေ ရေးဆွဲသူဖြစ်ပြီး သူ့ဒီဇိုင်းတွေကို ကမ္ဘာကျော်များဖြစ်တဲ့ Miley Cyrus, Drake, Taylor Swift နဲ့ Zara Larsson တို့ကတောင် ဝတ်ဆင်ခဲ့ကြကာ Rihanna ဝတ်ဖို့ အင်္ကျီကိုလည်း မိသားစုကတစ်ဆင့်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
မျောက် အရှင်လတ်လတ်၏ ဦးနှောက်ကို စပါယ်ရှယ်မီနူးအဖြစ်စားခဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့အရမ်းကြောက်စရာကောင်းတဲ့ တန်ပြန်ဝဋ် … ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ကြည့်ပါ…
နယ်စပ်မြို့လေးတစ်မြို့ရဲ့ နာမည်ကြီးစားသောက်ဆိုင်တစ်ခု။ ထိုစားသောက်ဆိုင်ရဲ့ VIPခန်းတစ်ခန်းထဲမှာတော့ ထိုမြို့ရဲ့လူကုံထံစာရင်းဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ စက်လှေသူဌေးကိုတိုးမင်းနဲ့သူငယ်ချင်းသုံးယောက်။ တစ်မြို့ထဲသားချင်းတွေပေမယ့် အလုပ်ကိုယ်စီနှင့် မဆုံဖြစ်ကြသော သူတို့တွေ ဆုံတိုင်းဆုံခိုက်အချိန်လေးမှာတော့ စားရင်းသောက်ရင်းရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်များပြောရင်းဖြင့် တဝါးဝါးတဟားဟားပွဲကျနေကြသည်။
သန်းကြွယ် သူဌေး ဆင်းရဲသွားတဲ့အခါ
ကားစီးနိုင်တဲ့သူတွေကို မနာလိုဖြစ်ပြီး ည(၃)နာရီလောက်ရပ်ထားတဲ့ကားတွေကိုဓါတ်ဆီလောင်း မီးရိူ့ ခဲ့လို့ကားဆယ်စီးမီးလောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံ ချွန်ဘူရီပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ခုတော့တရားခံမိသွားပါပြီ။
တချို့လူတွေကတော့ ဆင်းရဲ မြဲ ဆင်းရဲ..အချို့သူတွေကချမ်းသာမြဲချမ်းသာ ရခြင်းအကြောင်း
ဟိုး တစ်ချိန်က အရမ်းကို ဆင်းရဲ တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတယ်… သူ့ကို အရမ်းချမ်းသာတဲ့လူတစ်ယောက်ကတွေ့တော့ သနားပြီး သူ့ကို ကြီးပွားလာအောင် ကူညီချင်စိတ်တွေပေါ်လာတယ်…သူဌေး က သူ့ကို နွားတစ်ကောင်လက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်… သူ့ကို လယ်ယာ ထွန်ယက် ဖို့ သေချာမှာခဲ့တယ်…အခုချိန်မျိုးစေ့ ကြဲထားပြီး ကောင်းကောင်း ထွန်ယက် ရင် ဒီနှစ်ကုန်ရင် ဆင်းရဲတယ် ဆိုတဲ့ စကားလုံး နဲ့ ဝေးဝေးခွာနိုင်တော့မှာပါလို့ ပြောခဲ့တယ်…
Rangoon ဆိုတဲ့ ကုလားကား
၁၉၈၈ မှာ မြန်မာပြည် ကနေ အိန္ဒိယ ကို ပြောင်းလာတဲ့ တမီလ် မိသားစု တစ်စုက ကောင်လေး။
အရွယ်ရောက်ပြီး ရပ်ကွက်ထဲ ဇ ရှိတဲ့ ဇိုးပေါက်စဖြစ်လာတဲ့အခါ ရွှေမှောင်ခိုလုပ်ငန်းရှင်ကြီးက ဆွဲစားလိုက်တယ်။လုပ်ငန်းရှင်ကြီးရဲ့ လက်ရုံးဖြစ်လာတဲ့ သူတို့ သူငယ်ချင်းသုံးယောက်ဟာ ရန်ကုန်ကို ရွှေမှောင်ခို သွင်းဖို့…မိုးရေး-တမူးနယ်စပ်ကနေ တဆင့် ဝင်လာခဲ့တယ်။
ငါ..ဘွဲ့မရခဲ့လို့ ဆိုပြီး စိတ်အားငယ်စရာ မလိုပါဘူး(ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်ယူဖြစ်အောင်ယူသွားပါ)
တောရွာလေး တစ်ရွာကနေအလွန်ရိုးသားတဲ့ လူငယ်လေးဟာ အလုပ်ရှာဖို့မြို့ကို တက်လာခဲ့တယ် ရှာရင်းရှာရင်းနဲ့ကုမဏီ တစ်ခုရှေ့မှာ လူစုလူဝေးကြီးရှိနေတာကြောင့် မေးမိလိုက်တယ်အကိုတို့ ဒါဘာလုပ်နေတာလဲဗျ ?“အေးးးညီ အလုပ်ရှောက်နေကြတာကွ ””မဟူရာ ကုမဏီလေကွာဝန်ထမ်းအသစ်ခေါ်နေတာ”“ဟာဟုတ်လားးး ညီလဲအလုပ်ရှာဖို့ တောကတက်လာတာ အကိုရ”“ အေးအေးဒါဆိုရှောက်ပေါ့ကွ””ဒီက လစာကောင်းတယ် ညီရ”
ဖိနပ် တိုက်ခဲ့တဲ့သူ က သမ္မတ ဖြစ်တော့ သူ ကတိ အတိုင်းလုပ်ခဲ့တယ်…..
၁၉၄၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်နေ့မှာ ဆင်းရဲသား လယ်သမား မိသားစု ဟာ ကောင်လေး တစ်ယောက်ကို မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်…
ဆင်းရဲလွန်းတာကြောင့် ကောင်လေးဟာ ၄ နှစ်သား အရွယ်ကတည်းက လမ်းပေါ်မှာ မြေပဲဆံ လိုက်ရောင်းခဲ့ရတယ်…